आर्कटिक, अन्टार्कटिक र अन्टार्कटिका कहाँ छ: मुख्य मतभेद र रोचक तथ्य
आर्कटिक र अन्टार्कटिक कहाँ छ? र प्रत्येक अन्य देखि पृथ्वीको यी क्षेत्रहरु बीचको मतभेद? यो प्रश्न तिनीहरूले conscientiously स्कूलमा भूगोल अध्ययन पनि भने, धेरै मानिसहरू पहेली। यो हाम्रो लेख मदत गर्नेछ जवाफ।
आर्कटिक अन्टार्कटिक विपरीत
एकदम लोकप्रिय भौगोलिक पहेली लेखिएको निम्नानुसार: "? ध्रुवीय भालू पेंगुइन खान के" एक वयस्क को मस्तिष्क तुरुन्तै विचार को एक तार्किक श्रृंखला निर्माण गर्न थाल्छ। स्मृति मा स्कूल पाठ्यपुस्तकहरु, जहाँ उनि र अन्य जनावर अनन्त बरफ र गंभीर जाडो परिदृश्य को पृष्ठभूमिमा चित्रण गरिएको चित्र फ्लोट। मानिस त सोच्छ: ध्रुवीय भालू - शिकारीहरु र पेंगुइन छन् - एक बरु भद्दा चरा सजिलो शिकार। फलस्वरूप, पहिलो दोस्रो भोजमा खुसी हुनुपर्छ।
तथापि, यो त छ! हरेक कि जंगली यी जनावरहरू तिनीहरूले संसारको पूर्ण बिभिन्न भागमा बाँच्न किनभने, सामान्यतः पूरा गर्न सक्छन् अनुमान। तिनीहरूलाई को - आर्कटिक र अन्य - अन्टार्कटिका। त्यसकारण, तिनीहरूले कुनै पनि चिडियाघर विकास गर्न सक्ने प्रत्येक अन्य हेर्न।
आर्कटिक र अन्टार्कटिका कहाँ छ - र यो थप छलफल गरिनेछ। प्रकृति, जलवायु र यी क्षेत्रहरूको जैविक संसारको सुविधाहरू के-के हुन्?
आर्कटिक कहाँ छ? क्षेत्र को संक्षिप्त विवरण
आर्कटिक, अन्टार्कटिक र अन्टार्कटिका कस्तो भिन्नता छ? यो भौगोलिक मुद्दा बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
आर्कटिक दुनिया मा कहाँ छ? संसारको कुन भाग मा तपाईं यसलाई खोज्न आवश्यक?
उत्तर र दक्षिण - सुरुमा, हामी हाम्रो ग्रह पृथ्वी आपसमा diametrically विरोध जुन दुई डंडे, छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। जहाँ आफ्नो बाटो, जहाँ आर्कटिक फेला पार्न यो मदत गर्नेछ, र - अन्टार्कटिका।
तसर्थ, आर्कटिक - पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तर ध्रुव यसलाई सीधै आसन्न छ। भौगोलिक यसलाई कवर आर्कटिक महासागर, उत्तरी प्रशान्त र एटलान्टिक महासागर को सीमा। आर्कटिक पनि यूरेशिया र उत्तरी अमेरिका को मार्जिन, साथै धेरै टापुहरू समावेश गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीं शारीरिक र भौगोलिक दक्षिण सीमा मा म्याक्रो-क्षेत्र आर्कटिक वृत्त। क्षेत्र क्षेत्र, यसको पकड दक्षिणी सीमाना आधारमा 21 लाख बीच र 27 वर्ग किलोमिटर छ।
अब तपाईं जहाँ आर्कटिक थाहा छ। उनको मानिसको विकास के थियो? र जब यो सुरु?
आर्कटिक र उत्तर ध्रुव को विजय को इतिहास
आर्कटिक लामो समय पहिले Inhabited छ। यो धेरै पुरातात्विक भेट्टाउनेछन् द्वारा प्रमाणित छ। त्यसैले, मानिस पहिलो अर्को 30 हजार वर्ष पहिले लागि आर्कटिक महासागर को किनारा मा देखियो। पछि तथापि, टाढा उत्तर निकाल्न आफ्नो सुरु। को ध्रुव जित्न गर्न चाहने साहसी प्राण पनि थिए।
क्षेत्र को गम्भीर र क्रमबद्घ अध्ययन XIX सताब्दी को दोस्रो आधा थाले। समय को सबै भन्दा प्रसिद्ध ध्रुवीय अन्वेषक नार्वेजियन Fridtjof Nansen छलफल। संसारको सबै भन्दा ठूलो द्वीप - विशेष मा, त्यो पहिले ग्रीनल्याण्ड बरफ टोपी पार गर्न सक्षम थियो हुनुको इतिहास गरे। यो 1889 मा भयो।
रबर्ट Piri - आर्कटिक अन्वेषण को इतिहास मा अर्को महत्त्वपूर्ण परिवार नाम। 1908-1909 मा, त्यो पहिलो उत्तर ध्रुव पुग्यो जो एक यात्रा संगठित। के रोचक छ, यो अभियान को उद्देश्य मात्र यो रेकर्ड थियो। कुनै वैज्ञानिक यात्रा अनुसन्धान सञ्चालन गरेनन्।
आर्कटिक7अचम्मको तथ्य
आर्कटिक - एक अद्भुत क्षेत्र रहस्य, रहस्य र असामान्य प्राकृतिक घटना को पूर्ण छ भनेर। तल बारेमा सबैभन्दा रोचक तथ्य हो:
आर्कटिक को जैविक संसार, यस्तो कठोर जलवायु बावजुद, पर्याप्त धनी। विशाल बरफ क्षेत्र घनी ध्रुवीय भालू, Foxes, Lemmings, reindeer, चरा र अन्य जनावर को प्रजाति दर्जनौँ द्वारा आबादी। यहाँ तपाईं पनि सामान्य काग पूरा गर्न सक्छन्!
आर्कटिक रूस सहित पाँच अमेरिका, तिनीहरूको अधिकार दावी;
अनुमानित अनुमान वैज्ञानिकहरूले अनुसार आर्कटिक तखता, तेल र ग्याँस एक 100 भन्दा बढी अर्ब टन लुकाउँछ;
वरिपरि 50 लाख वर्ष पहिले, आर्कटिक जलवायु धेरै मामूली थियो। को गर्मी मा ती दिनमा आर्कटिक महासागर मा पानी + 15 ... 18 डिग्री आत्मीय सम्बन्ध गाँसे!
आर्कटिक - ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक प्रक्रिया सबैभन्दा कमजोर छ जो धरती, एक क्षेत्र;
मरुभूमि उष्ण कटिबन्धीय मा, तर पनि आर्कटिक मा मात्र छैन। यहाँ मात्र तिनीहरूले आर्कटिक भनिन्छ;
पुरातन युनानी Pytheas को आर्कटिक पानी मा पहिलो यात्रा चतुर्थ शताब्दी ई.पू. मा गरे।
अन्टार्कटिका, र अन्टार्कटिका - तिनीहरू कहाँ छन्?
अन्टार्कटिका भूगोल आर्कटिक देखि ग्रह को विपरीत पक्ष मा स्थित छ जो धरती, को दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रहरु भनिन्छ। अन्टार्कटिका को महाद्वीप र प्रशान्त, अटलांटिक र भारतीय महासागर (धेरै विदेशी विद्वान यस क्षेत्रमा पहिचान छ अझै पनि को अर्थ महासागर एक पाँचौ छ - दक्षिण) को दक्षिणी टिप - यो एक विशाल ल्याण्डमास समावेश छ।
अंटार्कटिक को उत्तरी सीमा पारंपरिक छ। अक्सर यो (50-55 डिग्री दक्षिण अक्षांश बीच) बरफ क्षेत्र अस्थायी किनारा साथ गरिन्छ। यसरी, अन्टार्कटिक को कुल क्षेत्र को पर्याप्त आर्कटिक भन्दा उच्च र लगभग 60 लाख वर्ग किलोमिटर।
को southernmost र coldest - अन्टार्कटिका, माथि भने गरिएको छ, यो ग्रह पृथ्वीको छैटौं महादेशमा छ।
अन्टार्कटिका को खोज र अन्वेषण को इतिहास
को XVIII सताब्दी पहिले नै, मानिसहरूले हाम्रो ग्रह को दक्षिण मा त्यहाँ अर्को महादेशमा छ कि लाग्यो। पहिलो 1775 मा उहाँको लागि देख गए Dzheyms Kuk। आफ्नो circumnavigation समयमा उहाँले अधिक रहस्यमय "दक्षिणी भूमि" बन्द गर्न, दक्षिण खोल्ने हिंडे स्यान्डविच द्वीप।
अन्टार्कटिका को महाद्वीप को खोज को रूसी नेविगेटर Bellingshausen र एम पी Lazareva को यात्रा समयमा 1820 मा भएको थियो। यस पछि, अन्टार्कटिका मा विभिन्न समुद्र, द्वीप को आविष्कारहरू को श्रृंखला र नक्साङ्कन र भूमि।
1911 मा, बस दुई expeditions (एक रोआल Amundsen, अन्य नेतृत्व - रबर्ट स्कट) दक्षिण ध्रुव जित्न गए। तर भाग्य मात्र निराशाजनक डेयरडेविल्स को समूह मध्ये एक हो। डिसेम्बर 14, 1911, Amundsen नार्वेजियन झण्डा मा पोल फेला परेन। स्कट गरेको यात्रा समूह यसको सदस्य सबै फिर्ता बाटोमा मारिए, पछि 27 दिन को लक्ष्य पुगेको छ।
अन्टार्कटिका को महादेशमा धेरै खनिज स्रोत सम्भावित छ। तथापि, संसारको देशहरूमा 2048 को bowels गर्न महादेशमा को "inviolability" मा एउटा सम्झौता हस्ताक्षर गरे।
अन्टार्कटिका7अचम्मको तथ्य
हामी तपाईंलाई अन्टार्कटिका र अंटार्कटिक7रोचक तथ्य प्रस्ताव:
अन्टार्कटिका - ग्रह को coldest महादेशमा। 80 वर्ष मा धरती मा सबै भन्दा कम तापक्रम (-89 ° सी) सोभियत ध्रुवीय "वोस्तोक" स्टेशनमा रेकर्ड गरियो;
अन्टार्कटिका - ग्रह (जो केही ठाउँमा 1-1.5 मी को एक मोटाई पुग्छ को विशाल बरफ टोपी, गर्न मुख्यतया कारण) को पनि उच्चतम महादेशमा;
अन्टार्कटिका सबैभन्दा हावा चलेको र छ धरती मा driest स्थान (यो संसारको ताजा पानी 70% सम्म समावेश भन्ने तथ्यलाई बावजुद र यो);
अन्टार्कटिका - एक स्थायी जनसंख्या बिना मात्र महाद्वीप;
अन्टार्कटिका मा, पेंगुइन को छ प्रजाति घर। तिनीहरूमध्ये - सम्राट्लाई पेंगुइन, आफ्नो ठूलो आकार द्वारा प्रतिष्ठित जुन;
बरफ समतल देखि अन्टार्कटिका मा समय समयमा बरफ को विशाल chunks तोड्ने। यी मध्ये एक 2000 मा गठन र निःशुल्क पौडी गए थियो। यसको लम्बाइ 300 मी पुग्यो!
अंटार्कटिक मा, कुनै जेट ढिलाइ छ। यहाँ रहन वैज्ञानिकहरूले आफ्नो राज्य को समयमा बाँचिरहेका छौं।
आर्कटिक र अन्टार्कटिक संग्रहालय
तपाईं जहाँ थाह आर्कटिक र अन्टार्कटिक को संग्रहालय? धेरै मानिसहरू यस्तो संस्था को अस्तित्व सचेत छैनन्। यो यस्तो संग्रहालय छ त्यहाँ बाहिर जान्छ!
यसलाई पूर्व सेन्ट निकोलस चर्च साधारण विश्वास (सडक Marat, 24A) को निर्माण मा, सेन्ट पीटर्सबर्ग को शहर मा स्थित छ। 1930 मा चर्च बन्द थियो र यसको पर्खालको भित्र यो असामान्य संग्रहालय खुलेको छ। उनले आर्कटिक र अन्टार्कटिक को अध्ययन को इतिहास र विकास आगन्तुकहरूलाई परिचय।
यो प्रदर्शनी ध्रुवीय गियर, अद्वितीय उपकरण, दुर्लभ फोटो, जहाज र icebreakers को मोडेल, साथै पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रहरु को जंगली र कठोर प्रकृति चित्रण गर्ने धेरै चित्रहरू विशेषताहरु।
आर्कटिक, अन्टार्कटिक र अन्टार्कटिका कहाँ छ? अब तपाईं सजिलै यो प्रश्नको जवाफ गर्न सक्नुहुन्छ र विश्व मा माथि-उल्लेख क्षेत्र देखाउन। आर्कटिक र अंटार्कटिक बीच किलोमिटर हजारौं को दूरी भए तापनि बीच सामान्य धेरै छ। ग्रह अत्यन्तै चिसो गरेको दुवै भागमा, त्यहाँ हिउँ, बरफ र icebergs, र लगभग कुनै वनस्पति धेरै छ।
आधुनिक प्रदर्शन हालतमा
आकर्षण समारा क्षेत्र: जिल्ला, क्षेत्रीय र शहरी
को "Maynkraft" मा निर्माण कसरी र के गर्ने?
औद्योगिक उत्पादन listogib हात। तपाईंको आफ्नै हात listogib कसरी बनाउने
कुकिङ zucchini। विभिन्न व्यञ्जन व्यञ्जनहरु
मोटर चालकहरुलाई साक्षी खबरदार !!! DTP - छोडपत्र
Lent: यो सम्भव छ तपाईं सक्दैन। म Lent के खान सक्नुहुन्छ
संगठन को चासो प्रतिनिधित्व गर्न वकील को शक्ति।
गस्ती जूता जाडो पुरुष र महिला: निर्माता, मोडेल को एक समीक्षा र समीक्षा
कसरी माछा आकर्षित गर्न? धेरै विकल्पहरू
"श्री स्नायु" ग्लास: संरचना, विशेषताहरु